सञ्चार कर्मी डीबी खड्काको पुस्तक ‘नियत’को विमोचन भएको छ । पुस्तकलाई लेखक स्वयं र अभिनेत्री रेखा थापा, स्वस्तिमा खड्का, लक्ष्मी बर्देवा, नारायण अमृत र अमर खड्काले संयुक्त रूपमा यो पुस्तक विमोचन गरेका हुन् । दशक लामो चलचित्र पत्रकारितामा बिताएका खड्काले क्यामरा, एक्सन र कट पछाडि लुकेको महिलाको दर्दनाक वास्तविकतालाई पुस्तकमा उतारेका छन् । पुस्तक विमोचनसँगै रङ्गिन दुनियाँका रङ्गहीन दृष्टान्तमाथि अन्तर संवाद कार्यक्रम पनि राखिएको थियो । जसमा अभिनेत्री रेखा, स्वस्तिमा र लक्ष्मी मुख्य वक्ता थिए । खड्काको पुस्तकबारे अभिनेत्री रेखाले भनिन्, 'किताब असाध्यै मन पर्‍यो। जति पटक किताब पढ्यो उति मजा लाग्यो। फिल्म बनाऊँ जस्तो लाग्यो । पढ्दै जाँदा रुचिपूर्ण कथा लागे ।' यसै गरी अभिनेत्री स्वस्तिमाले पुस्तकले आफूलाई गहिरोसँग तानेको बताइन् ।
उनी थप्छिन्, 'कहिल्यै किताब नपढ्ने मान्छे म घर जाने बित्तिकै पढेँ । धन्न मैले सिरियस मान्छेसँग काम गर्न पाएँ र त्यस्तो दुर्व्यवहार भोग्नुपरेन ।' पछिल्लो समय निकै रुचाइएकी अर्की अभिनेत्री लक्ष्मीले पुस्तकमा चलचित्र क्षेत्रको वास्तविकता उल्लेख गरिएकोमा आफू प्रभावित भएको सुनाइन् । स्वस्तिमाले कथा पढिसक्दा निकै निसासिएको र आफैलाई प्रश्न गरेको बताइन्, उनको मनमा 'साच्चिकै यस्तै छ र चलचित्र क्षेत्र ?', 'यो सबै मैले नदेखेको वा नभोगेको हो कि ? अरूले मात्र भोगेका छन् कि ?' लगायत प्रश्न मनमा उब्जिरह्यो । यसै क्रममा नायिका रेखा थापाले चलचित्र क्षेत्रमा आउँदै गरेका पुरुष कलाकार आर्थिक रूपमा शोषित भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, 'यो विषयमा पनि पुस्तक आउनु पर्छ' । उनका अनुसार ‘एउटा पुरुषले सङ्घर्ष गर्दा सुरक्षाको चुनौती हुँदैन । तर, एउटा महिलाले काम गर्दै जाँदा उसलाई थुप्रै प्रकारका सुरक्षा चाहिन्छ ।’ अभिनेत्री बर्देवाले पुस्तक पढ्दै गर्दा पुस्तकमा भएका कथाहरूमा आफूलाई महसुस गरिन् उनलाई पुस्तकका पात्रहरूले भोगेका भोगाइहरू आफ्नै भोगाई जस्तै लाग्यो । कार्यक्रममा उनले सुनाइन्, ' म आफै यौन हिंसाको सिकारमा परेको थिएँ, आफ्नो उमेरको अपरिपक्वताले गर्दा त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ । त्यहाँ बाट बचेर फर्किएँ' । उनले थपिन्, 'यो क्षेत्रमा १ जना खराब मान्छे भए पनि २० जना राम्रो मान्छे छन्' ।